Feno dian'antsy ny vatany Ny vadiny no ahiana ho namono an'i Kaela
Vehivavy iray 28 taona antsoina hoe ; Kaela no maty novonoin’ny vadiny. Handeha any Andranolava hividy trondron-dranomasina no nivoahany ,
ny trano ny tolakandron’ny 1 mey teo niaraka tamin’ny tovovavy namany iray. Teny antenantenan-dalana anefa i Kaëla dia nilaza fa hiverina vetivety haka borosy nify izay hadinony any an-trano. Hariva ihany anefa ny andro, tsy hitan’ilay namany izay sasa-niandry azy i Kaëla. Mpihaza nivoaka maraina no nahita faty tao anaty kirihitra ny marain’ny sabotsy 2 mey, ka ity farany no nampandre ny fokonolona. Nahitana ratra nofiraina tamin’ny « coupe-coupe » ny vatany. Nahitana kapa sy akanjo tee-shirt an’ny vadiny tsy lavitra ilay faty ihany koa teo an-toerana. Ilay vadiny, izay tovolahy vao 24 taona, avy hatrany no nahiahiana ho nahavanon-doza araka izany. Fantatra fa nisara-panambadiana vao tsy ela izy roa, ary efa vita zara nisasaka ny fananan’izy ireo, herinandro lasa izay. Karohina io tovolahy io amin’izao.